Kwindawo yolwandle engaselunxwemeni yindawo enemisebe embindini, yokomoya, nengabonakaliyo ilanga. Isibhakabhaka ngumzimba wakhe, umoya nomphefumlo; nasemva kwale modeli ilungileyo ihlelwe ZONKE IZINTO. Ezi zinto zintathu zibubomi obuthathu, iidigri ezintathu ze-gnostic Pleroma, ezintathu "ubuso beKabali," YENKULUMBUSO yasendulo, ingcwele yabadala, i-En-Soph enkulu, enefom "emva koko hayi. ”
Vol. 1 NOVEMBA, 1904. 2
KUKHO imfuno ekhulayo yemagazini amaphepha ayo avulekela kwinkcazo yasimahla kunye nokungakhethi buso, isayensi, kunye nenkolo, kwisiseko sokuziphatha. IZWI lijolise ekuboneleleni le ntswelo. Iimpawu zokuziphatha zisekelwa kubuzalwana.
Yinjongo yethu ukunika indawo kumanqaku abhalwe ngokuqhubela phambili nayiphi na intshukumo ukuba nje eyona nto iphambili kukuba sisebenzele ubhuti babantu.
Ubuntu bunye kusapho olukhulu, nangona kunjalo bahlukaniswe kakhulu lucalucalulo lobuhlanga kunye neenkolelo. Sinenkolelo enyanisekileyo kwimbono ebonakaliswa ngokuyinxenye ngegama elithi, “ubuzalwana.” Intsingiselo yeli gama inomda kumntu ngamnye, ngokuthanda, utyekelo, imfundo kunye nophuhliso. Kukho ukwahlukahlukana okukhulu kwezimvo malunga nentsingiselo yegama elithi ubuzalwana njengoko kunxulumene nentsingiselo yegama elithi iNyaniso. Kumntwana omncinci, igama elithi “mzalwana” lihamba nalo icinga lokunceda kunye nokukhuselwa ngumntu onokuzikhusela kwiintshaba zakhe. Kuthetha kumzalwana omkhulu ukuba unaye umntu wokumkhusela. Kwilungu lecawe, eluntwini olufihlakeleyo okanye iklabhu, iphakamisa ubulungu. Unontlalontle uyixhumanisa nokwabelana okanye ukusebenzisana, ngendlela yoqoqosho.
Umzimba, umfamekisiwe kwaye uboniswe iziyobisi ngamehlo okugquma kwilizwe elixhokonxayo, umphefumlo awusiqondi isikhundla salo sokwenyani nakwimiphefumlo.
Ubhuti bubudlelwane obungenakuphikiswa phakathi komphefumlo nomphefumlo. Zonke izigaba zobomi zikholisa ukufundisa umphefumlo le nyaniso. Emva kokufunda ixesha elide kunye nomnqweno oqhubekayo, kuye kufike ixesha apho ubuzalwana buqondwa. Ke umphefumlo uyazi ukuba yinyani. Oku kuza ngokungathi kukukhanya kokukhanya. Ukukhanya kokukhanya kufikela kuye wonke umntu ngamanye amaxesha ebomini, njengokuqhagamshela komphefumlo wokuqala kunye nomzimba wawo, ukuvusa ukwazi emhlabeni njengomntwana, kunye nexesha lokufa. Ifleshi iza, ihambe, kwaye ilibale.
Kukho izigaba ezibini zokukhanyisa ezahlukileyo kwezi zingasentla, isibane esikhanyayo xa ubumama, kunye nokukhanya kukaMzalwana woBuntu. Siyazi ukuba iinyanga ezinde zentlungu kunye nexhala kunye nosizi, ezandulela ukuzalwa komntwana, zivuselela iimvakalelo zika "mama". Ngexesha lokukhala kokuqala komntwana osandula ukuzalwa, kwaye ngeloxesha akuziva ukuba ubomi bakhe buyaphuma buye kuyo, kukho imfihlakalo etyhilwa kwentliziyo “yomama”. Ubona ngamasango oBomi behlabathi elikhulu, kwaye okomzuzwana uyakhanya ungene engqondweni yakhe uyolo, ukukhanya, ilizwe lolwazi, emtyhilela inyani yokuba kukho ubunye nomnye umntu obo, nangona eyedwa ingekazinto yena. Okwalo mzuzu kuza imbonakalo ye-ecstasy, imvakalelo yobumbano, kunye nolwalamano olungenakuphikiswa phakathi komntu nomnye. Yeyona ndlela igqibeleleyo yokubonisa ukungazingci, ubuzalwana, uthando, esinalo kumava ethu obuntu. Ifleshi iyadlula kwaye ilibale. Uthando, ngokwesiqhelo, luyakhawuleza ukuya kolomama bemihla ngemihla, kwaye lungene kwinqanaba lokuzingca kukamama.
Kukho umlinganiso phakathi kolwalamano lomntwana kunina, kunye nobudlelwane bendoda ezelwe kabini ku-Atman okanye kwi-Universal Self. Umama uziva ulwalamano kunye nothando ngomntwana wakhe, ngoba, ngalo mzuzu ungaziwayo, elinye lamakhethini obomi litsalwa ecaleni kwaye kukho intlanganiso, ukuqonda okuphakathi, phakathi komphefumlo womama kunye nomphefumlo womntwana, lowo kufuneka ekhusele kwaye akhusele, kunye nomnye oza kukhuselwa.
I-neophyte, ngobomi obuninzi bokunqwenela kunye nokulangazelela ukukhanya kokomoya, ekugqibeleni ifikelela kumzuzu xa ukukhanya kugqabhuka. Uza kule njongo emva kweentsuku ezininzi emhlabeni, emva kobomi obuninzi kuzo zonke izigaba, iimeko, iimeko, nabantu abaninzi , kumazwe amaninzi, ngexesha lemijikelezo emininzi. Xa sele egqibe konke, uyayiqonda imikhwa kunye novelwano, uvuyo kunye noloyiko, amabhongo kunye nezilangazelelo zabanye abantu-abangabanye. Kuzalelwa kwihlabathi lakhe ukwazi okutsha: ukwazi ubuzalwana. Ilizwi lomntu livusa intliziyo yakhe. Isandi sinjengokukhala kosana olusanda kuzalwa kwindlebe “kanina”. Okungakumbi: kukho ubudlelwane obuphindwe kabini onamava. Uziva ulwalamano lwakhe noMzali oMkhulu womzali njengokuba esenza umntwana kumzali wakhe. Uziva enomnqweno wokukhusela nokukhusela, kanye njengokuba umama ebeya kumkhusela umntwana wakhe. Akukho mazwi aya kuyichaza le nto. Umhlaba uyakhanyiselwa. Ukwazi uMphefumlo oManyanisiweyo kuyaphaphama. UnguMzalwana. Uzalelwe kabini, azalwe kabini.
Njengoko ukukhala kosana kuvuka kunina kubomi obutsha, ngokunjalo nakwindoda evuselelekileyo ebomini kuvulelwa ubomi. Kwingxolo yentengiso, kwindawo yokuphumla kwentlango engenanyanga, okanye xa eyedwa ecamngca, uyasiva isikhalo soBuntu beNtandane obuKhulu.
Lo mnxeba umvulela ubomi obutsha, imisebenzi emitsha, uxanduva olutsha. Njengomntwana kunina ubuntu bakhe kuye. Uyayiva ukukhala kwayo, aze abuva ukuba ubomi bayo buyaphuma. Akukho nto iya kumanelisa ngaphandle kobomi obunikelwe ukulunga koluntu. Unqwenela ukuyondla njengotata, ukuyondla njengonina, ukuyikhusela njengomntakwabo.
Umntu akakafiki ngokupheleleyo kubunyani, kodwa unokucinga kancinci ngalo, aze aqalise ukusebenzisa iinkcazo zakhe.